Fampitandremana momba ny dia any Etazonia: Miala any Iràka na miomana amin'ny fandevenana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fampitandremana momba ny dia any Etazonia: Miala any Iràka na miomana amin'ny fandevenana
Androany ny masoivohon'i Etazonia sy ny Kaonsily any Baghdad dia nandidy ny famindrana ampahany ny mpiasa amerikana. Mandritra izany fotoana izany, ny fampitandremana momba ny dia ho an'ny Amerikanina te-hitsidika an'i Irà dia mivaky toy izao: Aza mandeha any Iràka noho ny fampihorohoroana, fakàna an-keriny, ary ady mitam-piadiana. Izany no fampitandremana nataon'ny Departemantam-panjakana amerikana momba ny fandehanana any Irak, na dia nanandrana nampiroborobo ny firenena ho vonona amin'ny fizahan-tany aza ny manampahefana Irak. Erbil tany Iràka dia voafidy ho “Arabo Tourism Renivohitra ”tamin'ny 2014 nataon'ny Arabo Tourism Komity. Na izany aza, ny tanànan'i Karbala sy Najaf no be mpitia indrindra mpizaha tany toeran-kaleha any Irak noho ny toerana misy ny tranokala ara-pivavahana ao amin'ny firenena.
Tandindomin-doza ny herisetra sy ny fakana ankeriny ny olom-pirenena amerikana any Irak. Vondrona mpampihorohoro sy mpikomy marobe no mavitrika any Iràka ary manafika tsy tapaka ny hery fiarovana Iraqi sy ny sivily. Ny milisy sekta anti-US dia mety handrahona ny olom-pirenena amerikana sy ny orinasa tandrefana manerana an'i Irak. Ny fanafihana ataon'ireo fitaovana mipoaka (IEDs) dia mipoitra amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, ao anatin'izany i Baghdad.
Voafetra ny fahafahan'ny governemanta amerikana manome tolotra mahazatra sy vonjy taitra ho an'ireo teratany amerikana ao Irak. Tamin'ny 15 May 2019, ny Departemantam-panjakana dia nandidy ny fialan'ny mpiasan'ny governemanta amerikana tsy vonjy maika avy amin'ny masoivoho amerikana any Baghdad sy ny kaonsily amerikana ao Erbil; Ny serivisy visa ara-dalàna dia haato vonjimaika amin'ny paositra roa. Tamin'ny 18 Oktobra 2018, ny Departemantam-panjakana dia nandidy ny fampiatoana ny asa vonjimaika ao amin'ny Consulat General US any Basrah. Ny seksiona American Citizens Services (ACS) ao amin'ny masoivoho amerikanina Baghdad dia hanohy hanome serivisy ho an'ny kaonsily ho an'ny olom-pirenena amerikana ao Basrah.
Ny olom-pirenena amerikana dia tsy tokony hamakivaky an'i Iraq mankany Syria mba hiditra amin'ny fifandonana mitam-piadiana, izay hiatrika loza mety hitranga amin'ny tena manokana (fakana ankeriny, ratra, na fahafatesana) ary risika ara-dalàna (fisamborana, onitra, ary fandroahana). Nanambara ny Governemantam-paritra Kurdistan fa hametraka sazy an-tranomaizina hatramin'ny folo taona amin'ireo olona izay mamaky ny sisintany tsy ara-dalàna. Fanampin'izany, ny ady amin'ny anaran'ny, na ny fanohanana ireo fikambanana mpampihorohoro voatondro, dia heloka izay mety hiteraka sazy, ao anatin'izany ny fotoan'ny fonja sy ny onitra lehibe any Etazonia.
Noho ny loza ateraky ny sidina sivily miasa ao anatiny na ny manodidina an'i Iràka, ny Federal Aviation Administration (FAA) dia namoaka fampandrenesana ho an'ny Airmen (NOTAM) sy / na ny Regular Federal Aviation Regulation (SFAR). Raha mila fanazavana fanampiny, ny olom-pirenena amerikana dia tokony hijery ny Fandrarana, fameperana ary fanamarihana ataon'ny fitantanan-draharaha federaly.
Raha manapa-kevitra ny ho any Irak ianao:
Mamolavola volavolan-dalàna ary manondro mpisitraka fiantohana sy / na fahefan'ny mpisolovava.
Ifanakalozy hevitra ny drafitra iray miaraka amin'ireo olon-tianao momba ny fikarakarana / fitandremana ny ankizy, biby fiompy, fananana, fananana, fananana tsy misy rano (fanangonana, sary, sns.), Firariana fandevenana, sns.
Mizarà antontan-taratasy manan-danja, fampahalalana momba ny fidirana ary teboka ifandraisana amin'ireo olon-tianao mba hahafahan'izy ireo mitantana ny raharahanao raha tsy afaka miverina araka ny kasainao hatao any Etazonia ianao. Tadiavo eto ny lisitr'ireo antontan-taratasy toa izany.
Mametraha drafitra fiarovana anao manokana miaraka amin'ny mpampiasa anao na ny fikambanana mpampiantrano anao, na mandinika hevitra amin'ny fikambanana fiarovana matihanina.
Misoratra anarana ao amin'ny Programme fidirana an-tsehatra Smart Traveller (STEP) handray fampandrenesana ary hanamora ny fitadiavana anao amin'ny toe-javatra maika.
Araho ny Departemantam-panjakana amin'ny Facebook ary Twitter.
Avereno jerena ny Tatitry ny heloka bevava sy ny fiarovana ho an'i Iràka.
Ny olom-pirenena amerikana mandeha any ivelany dia tokony hanana drafitra tsy ampoizina amin'ny toe-javatra vonjy maika. Avereno jerena ny Lisitry ny lisitry ny mpitsangatsangana.